Ukuphathwa kweeYunithi zaBavelisi bomoya - China Ukuphathwa komoya kweeyunithi zeefektri kunye nababoneleli
Icandelo lokuphatha umoya lisebenza ecaleni kwetyhefu ebandayo kunye nepholisayo ukuze ujikeleze kwaye ugcine umoya ngenkqubo yokufudumeza, ukungena komoya, nokupholisa okanye imeko yomoya. Isiphatho somoya kwiyunithi yorhwebo yibhokisi enkulu enezinto zokufudumeza nokupholisa iikhoyili, i-blower, iiracks, amagumbi, kunye nezinye izinto ezinceda umphathi womoya enze umsebenzi wawo. Umphathi womoya uqhagamshelwe kwi-ductwork kwaye umoya udlula usuka kwiyunithi yokuphatha umoya uye kwi-ductwork, emva koko ...
Ubunono beCandelo loyilo lweAHU Case;
Ukukhokela iTekhnoloji eyiNtloko yokuBuyisa ubushushu;
Aluminium Allay Isakhelo & Nylon Cold Bridge;
Iiphaneli zoLusu eziBini;
Izixhobo eziguqukayo ziyafumaneka;
Ukusebenza okuphezulu kokupholisa / ukufudumeza ohlobo lwamanzi;
Umdibaniso weefilitha ezininzi;
Umgangatho ophezulu fan;
Ulondolozo lula ngakumbi.
Iiyunithi zoPhuculo loBushushu beMizi mveliso
Isetyenziselwa unyango langaphakathi. Icandelo lokuPhathwa koBushushu boMbane beMizi mveliso zinkulu kwaye ziphakathi izixhobo zomoya opholileyo ezinemisebenzi yefriji, ukufudumeza, ubushushu rhoqo kunye nokufuma, umoya, ukucoca umoya kunye nokubuyisa ubushushu. Phawu: Le mveliso idibanisa ibhokisi yokudibanisa umoya kunye netekhnoloji yokwandisa umoya ethe ngqo, enokuthi iqonde ulawulo oluhlanganisiweyo lwendawo efrijini kunye nomoya. Inenkqubo elula, i-stabl ...
Ukubuyiswa kobushushu kwe-DX Coil yokuPhatha umoya
Idityaniswe netekhnoloji engundoqo yeHOLTOP AHU, i-DX (ukwandiswa ngokuthe ngqo) i-coil AHU ibonelela nge-AHU kunye neyunithi yokugoba ngaphandle. Sisisombululo esiguqukayo nesilula kuyo yonke indawo yokwakha, enjengevenkile enkulu, iofisi, iCinema, iSikolo, njlnjl. , kwaye sisixhobo esidibeneyo sobushushu kunye nemithombo yobushushu. Inecandelo lokucinezela lomoya opholileyo elingaphandle ...
Ubushushu ekuphatheni iiyunithi zokuphatha umoya
Umatshini womoya ombi ukubuyisela ubushushu bomoya, ukusebenza ngokukuko kobushushu kuphezulu kune-60%.
Uhlobo lwe-Dehumidification Type Air Handling Units
Uhlobo lwe-Dehumidification Type Air Handling UnitsUkusebenza okuphezulu kunye nokuthembeka: Iyunithi equlethwe kukuzenzekelayo ngentsimbi engenasici kunye nolwakhiwo lwesikhumba esiphindwe kabini ... ulusu lwangaphakathi lunokuba yi-SS. Umthamo omkhulu wokususa ukufuma. I-EU-3 yebakala yokuvuza okucoca ngokuqinileyo kungeniso lomoya. Ukhetho oluninzi lokuvuselelwa komthombo wobushushu: -ombane, umphunga, ifluic thermic ...
Icandelo lokuPhathwa koMoya eliHlanganisiweyo
Industrial AHU yenzelwe ngokukodwa mveliso mihla, ezifana Automotive, Elektroniki, Spaceflight, Pharmaceutical njl Holtop inika isisombululo ukusingatha lobushushu umoya ngaphakathi, ukufuma, ucoceko, umoya omtsha, VOCs njl